BREAKING: Amaechi gwara ndị nyocha nyocha ka ha leba anya na nkwekọrịta niile NPA nyere n'okpuru Hadiza Bala Usman
Politics Nwere ike 10, 2021
N'ihe banyere ebubo nke mmejọ ego site n'aka onye isi nchịkwa kwụsịtụrụ nke Ndị isi ọdụ ụgbọ mmiri na Nigeria (NPA), Hadiza Bala-Usman, Minista Ụgbọ njem, Rotimi Amaechi, guzobere otu nyocha iji nyochaa akwụkwọ nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ọ bụ Auwalu Suleiman, onye ntụzi ọrụ ụgbọ mmiri na-anọchite anya kọmitii mmadụ iri na otu, onye nọchitere anya ya bụ Maazị Ben Omogo, onye isi nhazi, nhazi na mmepe (OHCSF).
Mgbe launching na panel nke ase, Amaechi boro ndị òtù ya ebubo ime ezigbo nnyocha na nyocha zuru ezu.
Usoro na ntụzịaka kọmitii a gụnyere ndị a:
“Nyochaa ma nyochaa okwu butere nchupu nke ọdụ ụgbọ mmiri na ọdụ ụgbọ mmiri ndị ọzọ, ma kwenye nrube isi n’usoro nke nkwekọrịta dị iche iche, mkpebi ụlọ ikpe, yana ntuziaka onye isi ala.”
“Nyochaa ma nyochaa nrube isi nke ọwa ịkpọtụrụ Ọha na Ọha.
“Nyochaa ma nyocha maka ị nweta nkwekọrịta nkwekọrịta site na 2016 ruo ugbu a. Nye ndụmọdụ na ntụnye iji melite ọrụ nke Plọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọdụ Nigeriangbọ Mmiri nke Nigeria ma gbochie ụdị ihe ahụ n'ọdịnihu.
“Achọrọ m ihe ọ bụla ọzọ metụtara ọrụ a.”
Onyeisiala Muhammadu Buhari kwụsịtụrụ Bala-Usman n’izuụka gara aga ka o nwesịrị akụkọ banyere akwụpụtaghị ego dị ijeri N165 ijeri n’akpa gọọmentị.
Dabere na nkwupụta nke ọnụ na-ekwuchitere Onye isi ala, Garba Shehu, Onye isi ala Buhari kwadoro nkwupụta nke Mịnịstrị na-ebu togbọ njem iji guzobe Panellọ Ọrụ Nchịkwa nke Nyocha iji nyochaa njikwa NPA.
“Onye isi ala nyekwara ikike Hadiza Bala Usman, Onye isi nchịkwa, ka ọ kwụpụ n'akụkụ ka a na -eme nyocha ahụ. Mazị Mohammed Koko ga -arụ ọrụ. Onye isi oche nke ministri na -ahụ maka ọrụ ụgbọ mmiri ga -abụ onye isi oche, yana osote onye isi iwu nke otu ụlọ ọrụ na -arụ ọrụ dị ka odeakwụkwọ. "Minista ahụ ga -ahọpụta ndị ọzọ so na kọmitii ahụ," Shehu kwuru na nkwupụta ahụ.
GH NOTR M ISH MR HE Isi Isiokwu Ndị A Si TRANSLATOR NIGERIA OZI
Studentsmụ akwụkwọ Greenfield: Buhari kwesiri ileba anya na ịnabata ego $ 30 million safe school, 'SERAP kwuru April 25, 2021
Onye ọ bụla kwuru na m rịọrọ maka nkwekọrịta bụ ihe ihere nye onwe ya na onye ọ bụla ọ na - efe - Mbaka Nwere ike 3, 2021
Na ọgụ megide enweghị ntụkwasị obi, EU na-adụ gọọmentị etiti ọdụ ka ha leba anya na ndị agha April 30, 2021
Onye na-azụ ahịa nke nwetere mmerụ ahụ ọnya n'ihi mkparị nke ndị uwe ojii na-eme mkpesa banyere nde N7.5 na ụgwọ site n'aka ngalaba ikpe Lagos; ọ na-ekwu na o mefuola nde naira 30 na nlekọta Nwere ike 12, 2021
# ENDSARS: Ikpe Ikpe Drama dị ka onye ọka iwu na-akwado Nkwupụta Ọkà Mmụta Ọmụma Na Ọ Bụ Naanị Mmadụ Atọ nke Ahụhụ 99 Na-enwetara Bụ Ndị Egburu June 6, 2021
Anyị na-ebipụta ego mgbe anyị na-a sweụ iyi mgbe dum ị ghaara ndị Naịjirịa ụgha: Rotimi Amaechi Nwere ike 3, 2021
Usman nwetara $ 1.5 site na mmeri Masvidal na UFC 261 April 26, 2021
N’okpuru Atụmatụ Mkpagbu Pụrụ Iche, Delta ketara Ngo ruru ijeri naịra 100 - Okowa April 26, 2021
Tags:amaechi, hadiza bala usman, ọdụ ụgbọ mmiri nigerian, nigerian ọdụ ụgbọ mmiri ikike, ohcsf, rotimi amaechi
Nnyocha ndị a ma ama
obi nke onitsha
inye ike ntorobịa
Mịnịsta na mmanụ ala
minista nke ike
Kedu ihe ọ bụ
ibadan north north
ịhụnanya machibidoro iwu
ụlọ akwụkwọ mayflower
ọrụ dị mkpirikpi
ọdụ ụgbọ elu kaduna
nnukwu nwanne naija oge 4
oru ngo ugwu West Africa
mere ụmụ nwoke egwu
solọ akwụkwọ agụmakwụkwọ nke solarin
nwanyi obi uto
jungle ikpe ziri ezi
Ndị ọzọ NchNhr
Ọnụego Mgbasa Ozi
Nsụgharị Nigeria News Copyright © 2021.